ဘုရားဒါယကာ မှော်ဆရာ ရွာဦးစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဘုရားဒါယကာ မှော်ဆရာ ရွာဦးစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း
ဘုရားဒါယကာ မှော်ဆရာ ရွာဦးစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း
Posted by မှော်ဆရာ on Oct 28, 2011 in Photography | 20 comments
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မှော်ဆရာ ရိုက်ကူးခဲ့သော စေတီတော်အား ရွာသူရွာသားများ ဖူးမျှော်ကြည်ညိုနှိုင်စေရန် ရွာဦးစေတီအဖြစ် ဘုရားဒါယကာ မှော်ဆရာမှ ပင့်ဆောင် ပူဇော်လိုက်ပါသည် ။ မည်သူမဆို ဆင့်ပွား ပူဇော်နှိုင်ကြပါသည် ။
အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါ ..။
ဤသို့ပြုရသော ကုသိုလ်ကံကြောင့် ပုံကောင်း ပုံသန့်များစွာကို ဖန်တီးရိုက်ကူးနှိုင်စွမ်းရှိသော ဓါတ်ပုံဆရာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရပါလို၏ ။
မှော်မှော် ပုံ အားကီးကီးနေတယ်ဝေ့…
ကျွန်တော် လောဘကြီးပြီး ဖူးဆိုက်နဲ့ တင်လိုက်တယ် ခင်ဗျာ ..
သူကြီးကို အကူအညီ တောင်းဦးမှ ထင်တယ် …
ရွာသားဘုရား သူကြီးကောင်းမှုတော့ ဖြစ်ပြီ ….
ပုံကောင်း ပုံသန့်များစွာကို ဖန်တီးရိုက်ကူးနှိုင်စွမ်းရှိသော ဓါတ်ပုံဆရာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ရင်.. အရင်ဆုံးက ကင်မရာကောင်ကောင်းဝယ်လို့ရအောင် ငွေရှာဟေ့..။
ပြီးရင်.. ဓါတ်ပုံစာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်..။ ဆရာကောင်းရှာ ဆွေးနွေး…။
ဆုကြီးပန်စေတီဘေးနား ထိုင်နေတဲ့ ဘုရားဆင်းတုက.. အဲဒီလို ပြောတယ်..။
ဘုရားဆင်းတု အောက်မှာ အထုတ်တွေ အများကြီး ပတ်ချာလည်ဝိုင်းအောင် ချထားပြီး ထိုင်နေတဲ့ နဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့ စီလုပ်ကြီး မျက်မှန်အထူကြီး တပ်ပြီး ပေတီးခေါက်ရင်း ရေရွတ်နေတာ ကြားမိတာ ပြန်ပြောတာလို့ ထင်လွယ်မြင်လွယ်အောင် သေချာ တော့ မပြောဘူး။ ဟိဟိ..
(ခင်လို့ စတာ.. စိတ်မဆိုးရဘူးနော့……..။)
ဟေး ဒါမှ မဆူးကွ ….
မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ပါ သူကြီးရယ် …
ပွိုင့်လေးဘာလေး တော့ ကြိုထုတ်မပေးပဲနဲ့ .
ကင်မရာ ကောင်းကောင်း ၀ယ်ခိုင်းနေတယ်
ဟုတ်ပါ့ဗျာ … တကယ်ဆို အခုခေတ်ထုတ်ဝေသူတွေလို ဘယ်နှစ်ပိုစ် အပြတ်ရေးပေးရမည် …
တစ်ပိုစ့်ကို ဘယ်လောက်နဲ့ ပွိုင့်ဘယ်လောက် အရင်ယူထား ..ဆိုပြီး သူကြီးနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ … ရေးလို့ကောင်းအောင် အင်တာနက် လိုင်းကောင်းကောင်းလေးလဲ စီစဉ်ပေးပေါ့နော် …
ဂလု ဂလု အဲလေ(ဒီလေချင်ကလဲ) သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ (နေရာကဘယ်မှာတုံးဗျ)
ဆုကြီးပန်စေတီဆိုပါလား။ ရန်ကုန်ကပဲလား။ ဘယ်မှာရှိတာလဲ။ တည်နေရာလေးပါ ရေးပေးပါလား။
ကျွန်တော်တို့မြို့မှာပါဗျာ … မြို့နာမည်တော့ ရေးမပေးတော့ပါဘူး …. ထပ်ပြောရရင် အဲဒီ့ဘုရားကို ရုပ်ရှင်မင်းသား လူမင်းနဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ တည်ထားတာပါ .. ရန်ကုန်ကနေ ဝေးပါတယ် ….။
ဘုရားပုံတော်က ပုဂံက အာနန္ဒာ ဘုရား ပုံလို တည်ထားတာဗျနော်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖူးမျှော်သွားပါတယ် ဗျို့ 
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဘုရားဒကာမှော် ရေ
လပြည့်နေပုံ၊ စေတီတော်နဲ့နဂါးရုံဘုရားတို့ အားလုံးကို တစ်ခါတည်းပါအောင်ရိုက်နိုင်တဲ့ View Point ရွေးချယ်ပုံကို သဘောကျပါတယ်.. အားပေးနေပါတယ်
တော်တော်လေးကို ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ပုံလေးပါ။ သာဓုပါ မှော်ဆရာ ခင်ဗျာ။
ရွာထဲက ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် သတင်းအချက်အလက်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ကင်မရာက NIKON D40x ပါ။ 12 Mg Pixel ရှိပါတယ်..
lens က 18-55 normal – Ed ပါပါတယ် ။ VR မပါပါဘူး .
င်္F – 3.5 / Aperture 1/4 sec ပါ ။ ဖလက် ပိတ်ထားပါတယ်။ဒီလို angel ရအောင် ကြမ်းပြင်ပေါ် ၀မ်းလျှားမှောက်ပြီး ရိုက်ခဲ့ရပါတယ် ။ အဲ ISO ကတော့ 800 ပါ ။
နီကွန် ရှုတာ ကြီးပဲ ….
ဘော်ဒီ မချိန်းသေးဝူးလား ဆြာ ..
ကျနော်တော့ မနေ့က အောက်ဒိုးထွက်ရင်း ကျနော့် ဘော်ဒါ ကိုင်တဲ့ ဒီ ၇၀၀၀ အတော် သဘောကျလာတယ်ဗျို့..
ဒါပေမယ့် switch လုပ်ဖို့က မဖြစ်နိုင်တာမို့ …စိတ်လျော့ ထားလိုက်ပါသည်…
အခုလောလောဆယ် D3100 ကိုင်ထားပါတယ်ဗျာ ..
ဒီနှစ်တော့ တစ်ခုခု ထပ်လဲနှိုင်ပါလိမ့်မယ် …။
ဆွယ်တော်မှာရိုက်ထားတာလားဟင် … ။ ညဘက်ဆိုတော့ မီးရောင်ဝါ၀ါနဲ့ရွှေရောင်တွေ အရမ်း သပ္ပါယ်တာပဲ ။
မဟုတ်ပါ မအိတုန်ခင်ဗျား ကျွန်တော့တို့ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာပါ …
ဘယ်နယ်လဲ ဆိုတာ အတိအကျ ညွှန်ပါဦး ဘုရားဒကာ ရဲ့ 